ဆောင်းရာသီ အားကစား စန်း သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်တာနက် ကို လွှမ်းမိုး သွား သည် – Pandaily
Jan 21, 2022, 19:08ညနေ 2022/01/22 10:15:20 Pandaily
အျဖစ္၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဘေဂျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် နှင့် ပါရာ လံ ပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲ (ပေကျင်း ၂၀ ၂၂)အချိန် နီးကပ် လာသည်နှင့်အမျှ နှင်း လျှော စီး ခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ လူမှု မီဒီယာ ပလက်ဖောင်း တိုင်း နီးပါးကို လွှမ်းမိုး နေသော လူကြိုက်များသော စကားလုံး များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီ အားကစား အထူးသဖြင့် နှင်း လျှော စီး အားကစား သည် life style social media နှင့် e-commerce app Little Red Book (Little Red Book) တွင် ဆွေးနွေးမှု အများဆုံး အကြောင်းအရာ ဖြစ်လာပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပို့စ် ၅၀၀, ၀၀၀ ရှိသည်။ အခြား ပလက်ဖောင်း များနှင့် nbsp; အလားတူ လမ်းကြောင်း သစ် ပေါ်ထွက် လာခဲ့သည်။ & nbsp တွင်; ဗွီဒီယို ဝေမျှ ခြင်း အက် ပလီကေးရှင်း (တရုတ် ဗားရှင်း) တွင် နှင်း လျှော စီး နှင့်ပတ်သက်သော ဗီဒီယို ကြည့်ရှု သူ ၁၆ ဘီလီယံ ရှိသည်။ Netizens များသည် tutorial မှ စွမ်းဆောင်ရည် တင်ဆက် မှုများ အထိ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာ များဖြင့် တောက်ပ နေသည်။
“ ႐ုတ္တရက္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာကို ႏွင္း ေလွ်ာ စီး နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြ တူ တူ ပဲ ဗံုး ႀကဲ ပစ္ လိုက္ တယ္” လို႔ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ စြဲ ျမဲ သူ Meng De က ေျပာပါတယ္။ “ အွန်လိုင်း နာမည်ကြီး တွေကနေ အများပြည်သူ အထိ လူတိုင်း နီးပါး ဟာ နှင်း လျှော စီး အပန်းဖြေ စခန်းမှာ သူတို့ရဲ့ အားလပ်ချိန် & & nbsp ကိုသုံး နေပုံ ရတယ်။”
အမျိုးသား နှင်း လျှော စီး အဖျား သည်တရုတ် ၏ကြီးမားသော ဆောင်းရာသီ အားကစား အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆောင်းရာသီ အားကစား တွင်လူ ဦး ရေသန်း ၃၀၀ ပါ ၀ င် ခြင်း ၏ကြီးမားသော ရူပါရုံ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီ အစီအစဥ္မွာ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္မွာ စကိတ် ကြင္း ၆၅၀ နဲ႔ ႏွင္း ေလွ်ာ စီး ကြင္း ၈၀၀ ကို ျပင္ဆင္ ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လူသိရှင်ကြား ပိုမို ပြင်းထန် လာသည်နှင့်အမျှ တရုတ် ပြည်သူလူထု ၊ အထူးသဖြင့် လူငယ် များသည် ဆောင်းရာသီ အားကစား အတွက် စိတ်အားထက်သန် မှု များပြား လာသည်။
Data Analytics Company University Consulting ရဲ႕ သုေတသန ျပဳ ခ်က္ေတြအရ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တည္ေထာင္ ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာင္း ရာသီ အားကစား လုပ္ငန္း ဟာ ကမာၻ႔ အျမန္ဆံုး တိုးတက္ ေနတဲ့ လုပ္ငန္း ေတြထဲက တခု ျဖစ္ၿပီး ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္မွာ ေစ်းကြက္ အရြယ္အစား ဟာ ယြမ္ ဘီလ်ံ ၈၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၂၀ ၂၅ ခုႏွစ္မွာ ယြမ္ ၁ ထရီလီယံ လ်ာထား ခ်က္ကို ျပည့္မီ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
နှင်း လျှော စီး စျေးကွက် တစ်ခုတည်း သည်ယွမ် ၂၄ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ တရုတ်သည် ၂၀ ၂၂ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အနိုင်ရ ခဲ့သည့် အချိန်နှင့် nbsp ၊ ငါး ဆန ီး ပါး တိုးလာ တယ္။ သံ ကိန်းဂဏန်းများအရ ယခင်က နယ်ပယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားကစား တစ်ခုဖြစ်သည့် နှင်း လျှော စီး သည် လူကြိုက်များသော လူနေ မှုပုံစံ သို့ပြောင်းလဲ သွားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် သန်း ရာနှင့်ချီ သော လူများ ကဤ ထွန်း သ စ်စ စက်မှုလုပ်ငန်း သို့ ၀ င်ရောက် လာသည်။ နှင်း လျှော စီး စက်မှုလုပ်ငန်း အဖြူရောင် စာတမ်း အရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တရုတ်လူမျိုး ၁၃ သန်း ကျော်သည် နှင်း လျှော စီး တွင်ပါဝင် ခဲ့ကြပြီး ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ် နှင်း လျှော စီး ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော လ အနည်းငယ် က Tsinghua တက္ကသိုလ် အားကစား လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုတေသန စင်တာ (TUDSI) သည် လူငယ် ကွန်ယက် နှင့် တွဲဖက်၍ “ ဆောင်းရာသီ အားကစား ၂၀၂၁ တွင်တရုတ် လူငယ် များပါ ၀ င်မှု” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ WeChat နှင့် TikTok ကဲ့သို့သော ဗီဒီယို အတို များနှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပလက်ဖောင်း များသည် လူငယ်များ ဆောင်းရာသီ အားကစား အကြောင်း လေ့လာရန် အဓိက နည်းလမ်း များဖြစ်ပြီး ၆၉. ၆% နှင့် ၆၉. ၅% အသီးသီး ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ Little Red Book တွင် ယခု ဆောင်း ရာသီတွင် နှင်း လျှော စီး ရှာဖွေ မှုသည် ၁၅၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဆောင်းရာသီ အားကစား ၏ လူကြိုက်များ မှုသည် လာမည့် ပူပြင်း သည့် ခေါင်းစဉ် ကို အမြဲ ရှာဖွေ နေသော အွန်လိုင်း ကျော်ကြား သူများအတွက် ကြီးမားသော စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း များဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်း ကောင်း သည့် အွန်လိုင်း သြဇာ သက်ရောက် သူများ၊ ယခင်က နှင်း လျှော စီး ရန်မ ကြိုးစား ဖူး သူများ ပင် သူတို့၏ အကောင့် များသို့ အသွားအလာ ပိုမို ရရှိ ရန်မျှော်လင့် ချက်ဖြင့် အားကစား ကို ကလစ် နှိပ် ခြင်း အဖြစ်အသုံးပြု ကြသည်။ နေ့ချင်းညချင်း ဆိုရှယ် မီဒီယာ သည် နှင်း လျှော စီး နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ များနှင့် ပြည့်နှက် နေပြီး အွန်လိုင်း သြဇာလွှမ်းမိုး သူများသည် နှင်း လျှော စီး အပန်းဖြေ စခန်း များအတွက် သူတို့၏ အတွေ့အကြုံ များနှင့် လမ်းညွှန် ချက်များကို မျှဝေ ခဲ့ကြသည်။ နှင်း လျှော စီး နည်း မသိ သူများအတွက် နှင်း လျှော စီး ပစ္စည်းကိရိယာ များနှင့် နှင်း လျှော စီး အပန်းဖြေ စခန်း များတွင် အံ့သြ ဖွယ်ကောင်းသော ဓာတ်ပုံ များ ကိုမည်သို့ ရိုက်ကူး ရမည် နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ် များ သည်လူ များစွာ ၏ အာရုံ ကိုဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ နှင်း လျှော စီး ခြင်းသည် အွန်လိုင်း စကားလုံး တစ်လုံး မျှသာ မဟုတ်ဘဲ သန်း နှင့်ချီ သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များနှင့် ကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အပူ ဆုံး ခေတ် ရေစီးကြောင်း အသစ်များကို တူးဖော် နေသည့် တိုးတက် နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခု လည်းဖြစ်သည်။ ယခု ဆောင်းရာသီ နှင်း လျှော စီး ရာသီ ၏အ ထွတ် အထိပ် တွင် ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပလက်ဖောင်း များသည် သုံးစွဲသူများ ကိုပိုမို ဆွဲဆောင် ရန် ဆက်စပ် အွန်လိုင်း လှုပ်ရှားမှုများကို စတင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Xiaohongshu သည် “ Xiaohongshu Ice and Snow Season” အွန်လိုင်း ကင် ပိန်း ကို စတင်ခဲ့ပြီး ဘလော့ ဂါ များအား နှင်း လျှော စီး အကြောင်း ဓာတ်ပုံ များနှင့် ဗွီဒီယို များ တင် ရန်နှင့် အသွားအလာ အထောက်အပံ့ ပေးရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပလက်ဖောင်း Xiao Hongshu သည် သာယာ လှပ သည့် ဓာတ်ပုံ များကို အလွန်အကျွံ ပြုပြင် ခြင်းအတွက် အသုံးပြု သူများကို တောင်းပန် ခဲ့သည်
ဇိမ်ခံ အမှတ်တံဆိပ် များသည် နှင်း လျှော စီး ဆေးတောင့် များ ကိုစတင် ထုတ်လုပ် ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ် သူ များပိုမို ဆွဲဆောင် ရန်အတွက် စီးရီး များတွင် နှင်း လျှော စီး အဝတ်အစား များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ၂၀ ၂၀၊ နို ၀ င်ဘာလတွင် Dior သည် အဝတ်အစား များ၊ နှင်း လျော စီး များ၊ နှင်း လျော စီး များနှင့် သံခမောက် များကိုဖန်တီး ရန် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အမျိုးသား နှင်း လျှော စီး ဆေးတောင့် များ စတ င်ရန် အားကစား အမှတ်တံဆိပ် Descente, AK Skis နှင့် POC တို့ နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ဆောင်းရာသီ အားကစား တိုးတက် မှုသည် အချို့သော ကုမ္ပဏီ များ၏ အောင်မြင်မှု ဇာတ်လမ်း များကို အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ အထောက်အကူပြု ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဘေဂျင်း အခြေစိုက် နှင်း လျှော စီး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ Oxue Culture သည် BR Capital မှ “ ယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ” ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကုမ္ပဏီသည် Shenzhen Capital Group မှ Round A ရန်ပုံငွေ အတွက် ယွမ်သန်း ၂၀ (ဒေါ်လာ ၃. ၁ သန်း) ရရှိခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် North China ရှိ နှင်း လျှော စီး မိုဘိုင်း အက် ပလီကေးရှင်း သည် Gaojing Venture Capital & nbsp မှ သီးသန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားသော ယွမ်သန်း ၄၀ ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှု ပြီးစီးခဲ့သည်။
ေဆာင္း ရာသီ အားကစား လုပ္ငန္း ႏွင့္ ရင္းႏွီး သည့္ အမည္မေဖာ္ လိုသူ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုက “ ေပက်င္း ၂၀ ၂၂ ေဆာင္း ရာသီ အိုလံပစ္ ပြဲေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္း ရာသီ အားကစား ယဥ္ေက်း မႈကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာ ေနေသာ ယင္း လုပ္ငန္း ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ လိုေသာ ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ သင္တန္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကဲ့သို႔ေသာ အသံုး မခ် ရေသး သည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ေပး စြမ္း ႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။